‘थाहा छैन अब कसैलाई कसरी डेट गर्न पाउँछु’, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
‘थाहा छैन अब कसैलाई कसरी डेट गर्न पाउँछु’
एजेन्सी । अभिनेत्री कट्रिना कैफ र रणवीर कपूरको ब्रेकअपपछि उनीहरुको कयौं फ्यानहरु निराश भएका थिए । तर यो जोडीले ब्रेकअप गरेको तीन वर्षपछि आ–आफ्नो जीवन बिताउन सुरु गरेका छन् । यता अभिनेता राणवीर आफ्नो फिल्म ‘ब्रम्हास्त्र’को को–स्टार आलिया भट्टलाई डेट गरिरहेका छन् ।
अर्को तर्फ अभिनेत्री कट्रिना कैफ भने सिंगल नै छ्, साथै उनी लभ लाइफलाई लिएर खासै चर्चामा छैनन् । यसै सन्दर्भमा उनलाई किन अरु कसैलाई डेट नगरेकी ? भनेर प्रश्न गर्दा उनले भनिन्, ‘मलाई थाहा छैन कि मैले पुनः कसैसँग डेट गर्न पाउँछु ।’ उनले थपिन्, ‘अहिले म पूरै सिंगल नै छु ।’
बलिउड उद्योगमा अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपडा, दीपिका पादुकोण, सोनम कपूर लगायतका अभिनेत्रीहरुले आ–आफ्नो घर बसाइसकेका छन्, तर अभिनेत्री कट्रिना भने अझैं सिंगलनै छन् । यो विषयमा अभिनेत्री कट्रिनाले हाँस्दै भन्,ि ‘हो, मैले देखिरहेकी छु–सबैले विहे गरिरहेका छन् । प्लीज मलाई पछाडि नछोड्नुहोस् ।’
अहिलेको समयमा कट्रिना अली अब्बास जफरको फिल्म ‘भारत’मा ब्यस्त छन् । शाहरुख खान र आमिर खानसँगको उनको फिल्म दुवै फ्लप सावित हुनपुग्यो । आमिर खानसँगको ‘ठग्स अफ हिन्दोस्तान’ र शाहरुख खानसँगको ‘जीरो’ फिल्मलाई दर्शकहरुले खासै रुचाएनन् । यसरी उनको फिल्महरु फ्लप भइरहँदा सलमान खानसँगको ‘भारत’ फिल्मले राम्रो गर्नसक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । प्रियंका चोपडाले फिल्मबाट हात निकालेपछि सो फिल्ममा कट्रिनाको इन्ट्री भएको थियो ।